कति विश्वस्त छन् कोरोना खोपप्रति ज्येष्ठ नागरिक? सरकारले यही फागुन २३ गतेबाट ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदैछ। आइतबार भारतबाट १० लाख डोज ‘कोभिशिल्ड’ खोप आएसँगै सञ्चालन गरिने दोस्रो चरणको खोप अभियानमा ज्येष्ठ नागरिक प्राथमिकतामा छन्। यज्ञराज जाेशी
रक्षामन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको यो कडा सुरक्षासँग पछाडि उभिने सादा पोसाकमा खटिएका नेपाली सेनाका अधिकारीले बोक्ने ब्रिफकेशमा के हुन्छ? धेरैलाई चासोको विषय छ। सुजन पन्त
यसरी परे गुरु भट्टराईको निशानामा तिलक परियार
केही समयअघि नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईको एक विवादस्पद अडियो संवाद बाहिरियो। अडियोमा भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम लिँदै महोत्तरीको बर्दिवासका अनिल पासवानलाई अपहरणको धम्की दिएका थिए। पासवान शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदमुक्त गरेका प्रदेश २ का प्रमुख तिलक परियारका स्वकीय सचिव हुन्। उनै भट्टराईको निशानामा परियार परे। आयोमेल संवाददाता
निर्वाचन आयोगमाथि सरकारको अदृष्य छाया!
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार दल आधिकारिकताको दावी आइसकेपछि आयोगले त्यसको निरुपण प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने हुन्छ। साथै एक पक्षले आधिकारिकताको दावी गर्दै निवेदन परेपछि अर्को पक्षलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। तर, आयोगले अर्को पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई त्यसबारे कुनै औपचारिक सूचना दिएको छैन। प्रचण्ड–माधव समूहको तर्फबाट आयोगमा प्रतिनिधि तोकिएका लीलामणि पोखरेलले विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेर आयोगले षडयन्त्र गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। धैर्यकान्त दत्त
नेपालमा हिमताल फुट्ने खतरा कति छ?
अहिलेसम्म यसको एकिन जवाफ कसैले दिन सकेको छैन। किनकि यो क्षेत्रमा यसअघि कहिल्यै पनि हिमतालहरू देखिएका थिएनन्। हिमनदीमा बाढी आउनुको एउटा कारण त्यसको ‘बेसिन’ वा मुहानहरूमा भएका हिमताल विष्फोट हुनु हो। गजेन्द्र बाेहरा
नारायणहिटी अघि ओलीको तुजुक र शक्तिको दुरुपयोग!
शुक्रबार काठमाडौंको नारायणहिटी दरबार अगाडि कालो लङ कोट तथा सेतो कुर्ता–पाइजामा पहिरिएका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाका बाबजुद पनि अनुहारमा प्रशस्त खुसी देखिन्थ्यो। बेला–बेला आफू नजिकका नेताहरुसँग कानेखुसी गर्थे। सुजन पन्त
नारायणहिटी अगाडि ओली कद
धेरैलाई लागेको थियो, ‘नारायणहिटी अगाडि उभिएर ओलीले के भन्लान्?’ यसबारे आम नागरिकलाई पनि उत्तिकै चासो थियो। अनेकथरि टिकाटिप्पणी, विश्लेषण र अनुमानहरू आइरहेका थिए। तर, ओलीले केही भनेनन्। एउटा डिजिटल पर्दामा आफैंभन्दा ठूलो ‘साइज’मा देखिएका ओलीले वस् आफूबाट छुट्टिएर गएका ‘प्रचण्ड–माधव’हरूलाई गालीमात्रै गरे। गजेन्द्र बाेहरा
सत्यनारायण मण्डलमार्फत् ओलीले प्रचण्डलाई दिन खोजेको सन्देश
कार्यक्रममा पार्टीकै शीर्ष नेताका साथै अन्य प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीहरू उपस्थित रहे पनि मण्डललाई मात्रै मञ्च दिएर ओलीले प्रचण्ड–माधव समूहलाई मधेशलाई रिझाउने संकेत दिएका छन्। धैर्यकान्त दत्त
...अनि जीवनको रङ्गिन क्यानभासमा रमाउन थाले भक्तपुरका विकल
‘भविष्यमा यसलाई पेसा बनाउन नसके पनि बाचुन्जेल चित्र तथा मूर्ति बनाउन भने छाड्ने छैन,’ उनले भने, ‘चित्र बनाउँदा जति आनन्द र सन्तुष्ट हुन्छु, अरू काम गर्दा हुँदिनँ।’ उनले चित्र बनाउने समय नपाएका कारण खाइरहेको जागिर पनि छाडेका थिए। त्यो काम छाडेदेखि उनले अहिलेसम्म जागिर खाएका छैनन्। रेणु त्वानाबासु
वाह! पाटन अस्पताल र डाक्टर युवराज
डा. युवराज धेरै आत्तिने स्वभावका मानिस होइनन्। उनले ६ महिना अवधिमा जम्मा दुईपटक पिसिआर परीक्षण गरे। दुवैपटक उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आयो। पछि उनले परीक्षण नगरेको धेरै भएको थियो। दिवापलीको माहोल थियो। उनका धेरै साथीभाइमा संक्रमण पुष्टि भयो। परिवारका सदस्य पनि कोरोना पोजिटिभ भए। सबै पोजिटिभ देखिँदा उनले पनि पिसिआर परीक्षण गरे। तेस्रोपटक पिसिआर गर्दा उनमा कोरोना पुष्टि भयो। यज्ञराज जाेशी/पुष्पराज चौलागाईं
भक्तपुरका घरघरमा 'कफी सप'
अहिले भक्तपुरमा ‘लकडाउन’ पछि घरघरमा कफी सप सञ्चालन गर्न थालिएको छ। जहाँ नेपालीपन झल्किने डेकोरेसन गरिएका छन्। विदेशीका लागि बनेका पसल महँगो हुन्छ। नाम पनि विदेशी नै राख्ने चलन छ। तर, अहिले नेपालमा कफी सपको परिभाषा नै बदलिन थालेको छ। अहिले उपत्यकमा खोलिएका अधिकांश कफी सपको नाम स्थानीय भाषामा राख्न थालिएको छ। रेणु त्वानाबासु
भक्तपुरमा नमुना अनलाइन कक्षा चलाइरहेको एभरेस्ट स्कुल
अनलाइन कक्षाअन्तर्गत शिक्षकले आफ्ना विषयको दैनिक पाठ योजना र सम्बन्धित सामग्री एक दिन अगावै विद्यार्थीलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। पाठ सिकाइसकेपछि असाइनमेन्ट दिने, प्रोजेक्ट कार्य दिने, हाजिरी लिने काम गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले असाइनमेन्ट बुझाएपछि शिक्षकले परीक्षण ग्रेडिङ गरी विषयगत लेजरमा चढाउँछन्। आयोमेल संवाददाता
काठमाडौं महानगरभित्र विभिन्न ठाउँमा ‘स्मार्ट डस्टबिन’ जडान गरिएको छ, जसले फोहोरको मात्र होइन प्रदुषणको मात्रा, तापक्रम अवस्था पनि देखाउँछ। तर, नगरवासीले न ‘स्मार्ट फोहोर मलाई’ उपयोग गरे, न अन्य सुविधा नै उपभोग गर्न पाए। अनिता श्रेष्ठ
हेर्दाहेर्दै ‘अनलाइन’ बाट करोडौं लुट
‘नेपालमा सामाजिक सञ्जाल वा एप्सहरूको कुनै पनि सम्पर्क कार्यालय छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण विदेशमा सम्पर्क गर्नुपर्ने हुँदा अनलाइन ठगीमा बच्चादेखि वृद्धसम्म ठगिइरहेका छन्।’ रेणु त्वानाबासु
बलिउडमा जनकपुरिया प्रवेशको ‘बिग स्टेप’, सलमानको फिल्ममा भरे संगीत
प्रवेशले संगीत भरेको ‘कागज’ फिल्ममा उदितनारायण झा, अल्का याग्निकजस्ता भारतका लोकप्रिय गायक–गायिकाले स्वर दिएका छन्। उदित र अल्काबाहेक उनले भरेको संगीतमा अरजित सिंह, ऋचा शर्मा, बप्पी लाहेरी, नेहा कक्कर, दिव्य कुमारजस्ता चर्चित गायक–गायिकले पनि स्वर भरेका छन्। धैर्यकान्त दत्त
राजनीतिमा बामे सर्दै मनिषाका ५० वर्षे पाइला
‘जीवनमा धेरै राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षी भएकी छु,’ केही समयअघि मनिषाले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘तर, समाजसेवा गर्नका लागि राजनीति नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। राजनीतिलाई मैले करिअरका रूपमा लिन सक्दिनँ।’ क्यान्सर जितेपछि उनले एउटा पुस्तक लेखिन्। क्यान्सरसँगको संघर्ष कथाहरू बुनिएको उनको पुस्तक ‘हिल्ड’ निकै चर्चित छ। अंग्रेजी संस्करणमा प्रकाशित त्यो किताबलाई केही समयअघि पत्रकार स्वरूप आचार्यले नेपालीमा अनुवाद पनि गरेका छन्। गजेन्द्र बाेहरा
गृहमन्त्री थापाले दिल्लीराजसँग माफी किन नमाग्ने?
गृहमन्त्री थापाले नैतिकताका आधारमा पनि एसपी विष्टसँग माफी माग्नुपर्ने ती अधिकारी बताउँछन्। निर्मला बलात्कार र हत्या प्रकरणमा एसपी विष्टले जिल्ला अदालत कञ्चनपुरबाट सफाइ पाएपछि मन्त्रिपरिषद बैठकमा पुनर्बहाली माग गर्दै निवेदन दिएका थिए। सुजन पन्त